ETHIOPIA WAXA AY KA BILAWDAY GUMAYSI CUSUB XUDUUDA GORAYACAWL | Lughaya.Com
Tan iyo intii kacdoonka Oromadu uu bilawday waxa jira xaalad degdeg ah oo xuduudaha dalkaa itoobiya ay xukuumad Ethiopia ku soo Rogtay. Waxa ay ciidamada dawlada degaanka Somalilada Ethiopia ee Newboliska looyaqaano ay ka wadaan xuduuda u dhaxaysa Somaliland iyo Ethiopia baadhitaano aan hore loo arki jirin. Taasi oo caqabad weyn ku noqotay dadkii u safrayay dalkaa Ethiopia ee reer Somaliland.
Ciidankan Ethiopiya ayaa bilaabay in ay dadka ku bilaabaan dhac hanti iyo xidhitaaanka dadka sharciga haysta ee xuduuda Somaliland uga talaabaya Ethiopia . Waad arkaysaa dad farabadan oo ku xaniban laamaha socdaalka ee degmooyinka Awbare iyo Wajaale, dadkaasi oo iskugu jira caruur waayeel iyo dad xanuusanaya oo raba in ay Ethiopia u aadaan dhakhtar, balse ku xidhxidhan goobo xabsiya ah oo aad u nadaafad daran. Wakhtigii hore qofka bilaa sharciga ah ayuunbay yara xanibi jireen kadibna marka ay xoogaa lacag ah ka helaan way iska sii dayn jireen. Laakiin waxa haatan layaab ah in xataa kuwii sharciga haystay ay xidhayaan iyaga oo aad moodo in ay cadaw qabteen islamarkaasina kolma sargaal ayaa marka aad kharashsiiso kukale kuusoo tilmaamaya. Intaa waxa dheer jirdil iyo gacan ka hadal hadii qofku isku dayo in uu la yara dodo.
Dhawaan ayuunbay ahayd markii ay qabsadeen Baabuur uu lahaa Isuduwaha warfaafinta gobolka Awdal oo ay u ogololaadeen in uu booqdo walaashii oo Awbare ku xanuunsanaysa. Markii uu galay gudaha xuduudka Ethiopia ee Goroyacaw waa ay isku rogeen gaadhidhii iyo hantidii u saarnaydna way qaateen. Dhacdadaasi oo kowdii bishan sideedaad dhacday ilaahada waa ay haystaan baabuurkii. Waxa kale oo hadana ay qabsadeen gaadhi kale oo ay leedahay hayada FOW ooay saarnaayeen koox samaynaysay cilmibaadhis. Gaadhigan labaad ayaa ay qabsadeen ciidanka new boliska ee degmada Awbare waxana ay u soo talaabeen deegaanka Jufo Micidheer oo ka tirsan Somaliand halkaasi oo gaadhiaga ay ka afduubeen.
Waxa hadaba is waydiin mudan Ethiopia ma iyadaa dank u qabta Somaliland mise Somaliland ayaa danweyn ku qabta?. Runtii Somaliland waxa ay Ethiopiya u hayso ayaa ka wayn waxa ay Somaliland ka faaiido Ethiopia. Dekada Barbara waxa isticmaala Ethipian iyaga oo aan wax cashuur ah laga qaadin. Nabadgalyada xuduuda dheer ee Somaliland ay Ethiopia la leedahay wali wax dhib ah xaga Somaliland ugama tegin kharashna Ethiopiya kagama baxo. Somaliland waxa ay Ethiopia siisay saami maalgashiga dekada Barbara. Sidaas oo aytahayna Ethiopiya marna ma aqoonsana Somaliland waxaana markhaati ka ah dhawaan markii maxaabiista Somalilda iyo Somalilandba ahaa ay siidaynayeen waxa ay geeyeen Muqdisho. Talaabadaasi oo muujinaya sida uu u hooseeyo xidhiidhka dublamaasi ee Somaliland ay la leedahay Ethiopia
Ethiopiya waxa uga yimaada Somaliland waa maandooriyaha qaadka oo kaliya khudrada iyo cuntooyinka waa koontrabaa oo ma ogaola Ethiopia . Baabuurtooda iyo dadkoodu bilaa sharci ayay ku yimaadaan dalska Somaliland kuweenana marka ay tegaan ama ay galaan Ethiopiya waa lala wareegaa gaadhiga bilaasharciga ah, iyada oo dadkana inta la xidho waliba la ciqaabo.
, Arimahaasi oo dhan Xukuumada Somaliland indhaha ayay ka qarsanaysaa oo kama hadasho, dhawaan markii gudoomiyaha xisbiga UCID uu kahadlay dhibaatada Ethiopianku ay ku hayaan shacabkeena uu ka hadlayna waxa markiiba ka daba hadlay wasiiro xukuumada katirsan ku waasi oo muujiyay siyaasada Somaliland in tahay mid aan ogolay in xadgudubka Ethiopianka laga hadlo iskadaa xataa in waxlaga qabtee.